200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Shiinaha iyo Maraykanka ayaa meelmariyay heshiiskii isbadalka cimilada ee magaalada Paris | UfeynNews.com
Shiinaha iyo Maraykanka ayaa meelmariyay heshiiskii isbadalka cimilada ee magaalada Paris
Maraykanka iyo Shiinaha ayaa isla arrinta cimilada ka kulmi doona maanta
Shiinaha iyo Maraykanka ayaa meelmariyay heshiiskii isbadalka cimilada ee magaalada Paris, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Xinhua.
Labadaas dal ayaa masuul ka ah wasakhaynta hawada 40%, waxayna hadda meel mariyeen heshiiska Paris.
Shiinaha ayaa go’aankaas kaga dhawaaqay shirka ay leeyihiin dalalka ugu dhaqaalaha wayn adduunka ee G20 oo ka socda magaalada Hangzhou. Maraykanka ayaa isna isla talaabadaas qaaday kaddib markii uu shirka ka qayb galay madax madaxwayne Barack Obama.
Heshiiskan Paris oo taariikhi ahaa ayaa la gaaray bishii December, dalalkuna waxay ku heshiiyeen in ay yareeyaan wasakhaynta hawada si la isugu dayo in sare u kaca cimilada adduunka uusan dhaafin 2C.
Gudiga saree ee xisbiga CNPC ayaa ogolaaday subaxnimadii Sabtida kaddib “markii ay dib u eegeen heshiiskii Paris” iyaga oo muddo todobaad ah darsayay.
Heshiiska Paris waa midkii u horeeyay ee dhamaystiran ee ku aadan cimilada adduunka. Laakiin wuxuu sharci noqon doonaa oo kali ah marka ay saxiixaan ugu yaraan 55 dal oo soo saara 55% wasakhaynta hawada ah.
shiiska cimilada Paris ayaa lagu saxiixay